Na Niger, Ọkụ Agbagbuola Ụmụaka Ntaakara 20 n'Ụlọakwụkwọ - Igbo News | News in Igbo Language
Apr 24, 2021 - 15:22 Updated: Apr 25, 2021 - 11:05
Anyammiri gara na nsonso a dịka ọkụ ọgbụgba gbagburu ụmụaka ntaakara (nursery) dị iri abụọ n’ọnụọgụ na mba Niger, n’izuụka gara aga. Ọkụ ahụ gbachibidoro ha na klaasị ụlọ akịrịka (straw-hut classrooms) ha na-agụ akwụkwọ.
Onyeisi ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ mba ahụ, bụ Colonel Bako Boubacar kwuru sị na ọtụtụ n’ime ndị ahụ nwụrụ anwụ bụ obere ụmụaka; tinyere na amatabeghị ihe kpatara ọkụ ọgbụgba ahụ na Niamey.
Otu onyenkuzi so n’òtù jikọtara ndịnkuzi Niger kwuru na ụlọakwụkwọ ahụ nwèrè ihe dịka ụmụakwụkwọ narị asatọ, ndị gụnyere ụmụaka nọ na ntaakara.
Mounkaila Halidou kwuru sị: “Ọkụ ahụ malitere site na geeti ụlọakwụkwọ. Ebe e nweghị ebe ọzọ a ga-esi gbapu, ọtụtụ ndị mmadụ tọkịịrị n’ime, ebe amanyere ụmụakwụkwọ ka ha maa elu aja wee gbapụ. Ndị nwụrụ anwụ bụkarịchara ụmụaka ndị ka nọ na ntaakara.”
Onye ọrụ nsọnyụ ọkụ ọzọ kwuru na ọkụ ahụ gbagworo klaasị ụlọ akịrịka dị iri abuọ na otu nke ụmụaka tọkịịrị n’ime ha.